Ndị mmepe Gentoo Na-atụle Ọnụọgụ Nkebi nke Kernel | Site na Linux
Ndị mmepe Gentoo na-atụle ohere nke ọnụọgụ abụọ nke kernel
niile ndi a gbara ume ka ha jiri Gentoo, ha maara na Linux a ghagbula ọ bụ nke ukwuu customizable daalụ na anaghị eji precompiled binaries, Na nke onye ọrụ nwere ime mkpokọta usoro na ya nke na-enye ya nnukwu uru karịa nkesa ndị ọzọ ebe ọ bụ na ị nwere ike ịmepụta mkpokọta lekwasịrị anya na kọmpụta kọmputa, na-enye ya nnukwu mmiri na arụmọrụ.
Ebe ọ bụ na Portage, nke na-eme ụfọdụ atụmatụ dị elu dị ka njikwa na-adabere na ya, ịlele ngwugwu nke ihe onye nchịkwa chọrọ, OpenBSD-style bouti installation, sandboxes n'oge chịkọtara, iwepu nchekwa, profaịlụ usoro, ngwugwu ngwugwu, njikwa faịlụ nhazi na ọtụtụ oghere maka ụdị dị iche iche nke otu ngwugwu.
Ma ugbu a, nke a nwere ike ịgbanwe ebe ọ bụ Ndị mmepe Gentoo na-atụle ekwe omume nke mee ndokwa nke nchịkọta kernel Linux nke na-achọghị nhazi akwụkwọ ntuziaka n'oge a na-achikota ha ma yie nkpuru kernel enyere na nkesa ndi ozo.
Como ihe nlere nke nsogbu nke ahụ na-ebilite mgbe eji ya ntuziaka n'iji kernel parameters eme na Gentoo, enwere ụkọ usoro nke ndabara nhọrọ na hụ na operability mgbe melite (Mgbe ejiri aka ya hazie, ọ bụrụ na kernel anaghị ebu ma ọ bụ ihe ọghọm emee, o doghị anya ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ kpatara site na ntọala ntọala na-ezighi ezi ma ọ bụ ahụhụ na kernel n'onwe ya).
Gentzọ ọdịnala ọdịnala nke ịnweta kernel bụ ịwụnye isi mmalite, wee hazie ma wuo onwe gị. Maka ndị na-achọghị ịgabiga usoro ahụ siri ike nke ịtọlite ​​ya aka, a na-enye ụzọ ọzọ iji iji genkernel. Otú ọ dị, ọ dịghị nke ọ bụla na ụdị ahụ nwere ike inye nha nke cores enyere site na nkesa ọnụọgụ abụọ.
Ndị mmepe bu n’obi ịnye kernel dị njikere na o doro anya na ọtọ enwere ike itinye ya na obere mbọ (Dị ka ebuild, nke ejiri ihe ntụle ndị ọzọ wuru) wee bụrụ onye njikwa ngwugwu ga-emelite ya na-akpaghị aka dịka akụkụ nke mmelite sistemụ oge niile.
Ka ọ dị ugbu a, etinyelarị ngwugwu sys-kernel / vanilla-kernel na ndabere ahụ site na isi kernel, na-agbakwunye ederede iwu a na-ewu ewu na mbụ na ụdị nhọrọ genkernel.
Ọ bụrụ na m ga-agbanwe mgbanwe sitere na ọdịnala ochie nke kernels omenala na ngwugwu kernel zuru ụwa ọnụ, m kwesịrị ịmalite site n'ịtụle ihe kpatara ị ga-eji chọọ ịhazi kernel omenala na mbụ.
The vanilla-kernel ngwugwu ruo ugbu a ọ gụnyere naanị ịgbakọta site na isi mmalite (nke etinyere n'ụdị ebuild), mana enwere ike ịkọwa mgbakọ mgbakọ ọnụọgụ abụọ.
Isi okwu a na-ekwu maka ya bụ ịgbalịsi ike. Dịka e kwuru n'elu, ike gwụrụ m n'onwe m iji aka m na-emeso kernel m. Ihe ndị a bara uru a kpọtụrụ aha karịrị ọnwụ nke oge mmadụ ịhazi na idobe kernel omenala?
Otu n'ime uru nke ntuziaka kernel n'iji ya gee ntị, ikike ịkụzi arụmọrụ, wepu akụrụngwa na-enweghị isi n'oge chịkọtara, mee ka mkpokọta dị mkpụmkpụ ma belata kernel n'ihi (dịka ọmụmaatụ, iwu kernel nke onye na-akwado ya na-ewere 44MB yana modulu, ebe kernel zuru ụwa ọnụ na-ewere 294MB).
N'ime adịghị ike, a hụrụ na a ndudue nwere ike mfe mere n'oge Mbido, enwere ike inwe nsogbu na mmelite ahụ, ekweghị ibe nọrọ, isi ike ịchọpụta nsogbu.
Inye nke mkpokọta a na-atụle ọnụọgụ abụọ n'ihi kernel zuru ụwa ọnụN'ihi oke ya, ọ na-achịkọta ogologo oge ma na-anapụta kernel emechara Ọ nwere ike ịme ka ndụ nke ndị ọrụ sistemụ ike dị ala dị mfe.
Ọ bụ ezie a hụrụ nke a dị ka "echiche", Ndị mmepe Gentoo ewepu iwepụ ya na ha na-ekwu maka ya gbasara ya, ebe na akụkụ nke ndị ọrụ, echiche dị na mbụ.
Si ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele ederede mbụ na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ndị mmepe Gentoo na-atụle ohere nke ọnụọgụ abụọ nke kernel
Hyperbola, gbahapụrụ Linux wee ghọọ ndụdụ nke OpenBSD
VkAudioSaver: Russian Music Downloader App Na-arụ Ọrụ Ọzọ